Kenya oo la shaqayn doonto ciidamada AMISOM - BBC Somali
Kenya oo la shaqayn doonto ciidamada AMISOM
16 Nofembar 2011
Image caption Raiisal wasaaraha Kenya Raila Odinga ayaa booqasho uu ku tagey Israe toddobaadkan waydiistay inay ka caawiso la dagaalanka Al Shabaab
Kullanka maanta ay yeesheen madaxda seddexda waddan waxaa sidoo kale la isku afgartay in si dhow isula shaqeeyaan ciidamada Kenya, kuwa Dowladda ku meel gaarka iyo ciidanka Amisom si meesha looga saaro kooxda Al Shabaab.
War murtiyeed si wada jir ah ay u soo saareen madaxda waddamada Kenya, Uganda iyo Soomaliya ayaa waxaa lagu sheegay in waddamadan ay soo dhoweynayaan rabitaanka Kenya ay ula shaqaynayso AMISOM.
Kullanka ayaa waxaa ku beegmay iyadoo ciidanka Kenya muddo bil ah howgal militari ka wadaan gudaha Soomalia waxayna sheegtay Kenya in ay Soomaliya kula dagaalamayso kooxda Al Shabaab oo ay ku eedeynayso in ay ka dambayso afduubyo dhowr ah oo ka dhacay Kenya kuwaas oo lagu bartilmaamaydsaday dad reer Yurub ah.
Madxweynaha Dowladda Ku meel gaarka ee Soomaliya Sheikh Shariff Sheikh Axmed ayaa lagu martiqaaday kulankaas, iyadoo sidoo kale uu jiray mugdi soo kala dhaxgalay Soomalia iyo Kenya ka dib markii madaxweynaha DKM ee Soomaliya sheegay in ciidamada Kenya aanay ogolaasho ka haysan Maamulkiisa iyo beesha caalamka.
Kenya ayaa waxay dadaal xooggan ugu jirtaa sidii ay taageero ugu heli lahayd hawgalkaasi. Kenya waxay taageero ka raadinaysa Maraykanka, Israel, Midowga Africa iyo Urur Goboleedka IGAD. Waa markii ugu horaysay oo Madaxweynaha Soomaaliya booqdo Kenya tan iyo intii uu bilawday howgalka Kenya.